SEO के हो? 💻 हामी नि: शुल्क एसईओ विश्लेषण प्रदान गर्दछौं - Ne gerekir?
SEO के गर्छ? हामीले SEO काम किन गर्नुपर्छ?
SEO के हो? SEO को मतलब वेबसाइटको साथ सबैको लागि सबै कुरा! एसईओ ले तपाईंलाई भन्छ कि म यहाँ छ हरेक पथमा छु। Article यस लेखको साथ, एसईओ को सरल तर्क अब तपाईको दिमागमा स्वतन्त्र रूपमा प्रसारित हुनेछ। किनकि हामीले यसलाई एक धेरै सरल र रमाईलो तरीकाले व्याख्या गरेका छौं।
हामीले तपाईंलाई के प्रस्ताव गर्‍यौं?
➜ हाम्रो सामग्रीमा विस्तृत र सरल व्याख्या हुन्छ।
➜ हामीले SEOको बारेमा Ayhan KARAMAN अनौंठो तर जिज्ञासु प्रश्नहरू सोध्यौं।
➜ हामीले सेरेमेन्टिक एसईओको बारेमा कोराए टुबर्क GÜBÜR मा कुरा गर्यौं र धेरै उत्सुक प्रश्नहरू सोध्यौं।
All सबै भन्दा राम्रो, हामीसँग एउटा उपहार छ! हामी तपाइँको साइट को लागी नि: शुल्क SEO विश्लेषण सिर्जना गर्नेछौं!
हामी के भन्ने गर्छौं अन्य खोज इञ्जिनहरूमा पनि लागू हुन्छ। यो गुगल हो जुन यस व्यवसायको धेरै ख्याल राख्छ।
गुगल खोजी ईन्जिन हो। यो प्रदान गर्ने सेवा भनेको क्रमशः सबै भन्दा उपयुक्त र उच्च गुणस्तरको सामग्री प्रस्तुत गर्नु हो सर्च गरीरहेको सर्तमा। यदि यो क्रमबद्ध तरिकाले गर्न सकिदैन कि आगन्तुकलाई सन्तुष्ट पार्छ, मानिसहरूले यो खोज इन्जिनलाई रुचाउँदैनन्। यसैले गुगलले यो काम गर्नेलाई शीर्षमा राख्दछ, र नगर्नेहरूलाई हटाउँछ।
गुगलले कसरी प्रासंगिक र गुण परिणाम चयन गर्दछ? अवश्य पनि, एसईओ अध्ययनको अनुसार। SEO खोज इन्जिन अनुकूलनको लागि खडा छ। गुगल चाहन्छ तपाईले खोज ईन्जिनका लागि तपाईको साइटलाई अप्टिमाइज गर्न। अर्को शब्दहरु मा, उहाँ तपाइँ तपाइँको साइट को लागी र खोज इंजन र आगन्तुकहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो बनाउन को लागी चाहान्छ। यसले प्रत्येक वेबसाइटको एसईओ अध्ययनको साथ मूल्याates्कन गर्दछ जसले यसलाई पत्ता लगाउँदछ र तदनुसार परिणामहरू लिन्छ।
एसईओ एक विकास प्रक्रिया को रूप मा परिभाषित छ कि तपाइँको साइट को विकास, गुणवत्ता र यातायात को वृद्धि गर्दछ। यो एक परिणाम उन्मुख परिभाषा हो। हामी तपाईंलाई उसलाई अझ राम्ररी चिन्न दिनुहोस्।
एसईओ वास्तवमा एक भाषा हो जुन तपाईं सामान्य रूपमा गुगलमा तपाईंको वेबसाइट वर्णन गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाईंले उसलाई आफ्नो परिचय दिनै पर्छ।
हामीले गर्ने सबै एसईओ कार्यको साथ, हामी गुगललाई निम्न भन्छौं;
"हामी यो कुञ्जी शब्दका नतीजाहरूको साथमा छौं!"
"हामी यस सन्दर्भमा आगन्तुकलाई गुणस्तरीय अनुभव प्रस्ताव गर्दछौं!"
"गूगल! हामीले उनीहरूले चाहेको कुरा गरे र उनीहरूलाई खुशी पार्न सके। हामीलाई इनाम दिनुहोस्! "
Google ले हामीले राम्रो गर्न चाहेको धेरै चीजहरू छन्। सामग्रीको गुणवत्ता, खोज आशयसँग प्रासंगिकता, र गति ती मध्ये एक हुन्। उहाँ गाह्रो शिक्षक हुनुहुन्छ। यसले तपाइँलाई एसईओ कोर्स पास गर्न बाध्य पार्छ। अर्को शब्दहरुमा, यसले वास्तवमै तपाईलाई चरण-देखि-चरण तालिम दिन्छ ताकि आगन्तुकहरु लाई तपाइँको साइट मा राम्रो अनुभव छ। यदि तपाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्न भने, तपाई कक्षामा विफल हुनुहुनेछ।
तपाइँ तपाइँको आगन्तुकहरु लाई खुशी गर्न को लागी सक्दो कोशिश गर्नुहुन्छ यो हाम्रो कुरा हो।
SEO प्रक्रिया के हो? SEO मा के समावेश छ?
हामी प्रायः चरणहरूको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौं जसले SEOलाई के काम गर्छ भनेर सोध्छन्। हामी कसरी यो गर्ने बारे हाम्रो लेख तयार गर्दैछौं। यदि तपाईं आफ्नो साइट खोल्न लाग्नुभएको छ वा यदि तपाईं आफ्नो अवस्थित साइटको एसईओ सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो लेख तपाईंको लागि उपयोगी हुनेछ।
हामीले SEO लाई अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ज्ञात चरणहरू उल्लेख गरेका छौं। अवश्य पनि त्यहाँ अन्य विस्तृत चरणहरू छन्।
साइट आईडी सिर्जना गर्दै
SEO चरणहरूका लागि साइट आईडी उत्पन्न गर्दै
यो चरण वास्तवमा नोट जस्तै हो जुन तपाइँले जहिले पनि हेर्नु पर्छ। कहिलेकाँही हामी हाम्रो साइटको उद्देश्य भन्दा पर जान सक्छौं। Google लाई पनि मनपर्दैन। त्यसकारण, सुरुमा हाम्रो विशेषताहरू निर्धारणले हामीलाई एक निश्चित तरिकामा प्रगति गर्न मद्दत गर्दछ।
➜ ब्रान्ड नाम
➜ ब्रान्ड स्लोगन
यसले के लिन्छ पत्ता लगाउन Ne Gerekirहेर्नु पर्छ!
➜ ब्रान्ड उद्देश्य
सबै कुरामा ne gerekirकसरी गर्न को लागि आवश्यक जानकारी र उपकरणहरू प्रदान गरेर एक विशाल ज्ञान प्लेटफर्ममा परिवर्तन गर्न।
➜ ब्रान्ड भिजन
। विश्वको सबैभन्दा भरपर्दो र उपयोगी जानकारी प्लेटफर्म हुन।
Visitors आगन्तुकहरूलाई अनुभव प्रदान गर्न जुन उनीहरूले प्रत्येक सामग्रीमा विशेष महसुस गराउँदछन्।
Ensure यो सुनिश्चित गर्न कि आगन्तुकहरूले उनीहरूलाई आवश्यक जानकारी द्रुत रूपमा पाउँदछन्, र उनीहरूले चाहेको जानकारीमा पुग्दा उनीहरूलाई अवरोध नपारून्।
Visitors सुनिश्चित गर्न को लागी आगन्तुकहरु सूचना बाट एक सुविधाजनक तरीका बाट फाइदा लिन्छन्, सुरक्षित महसुस।
➜ ब्रान्ड मानहरू
चाहे हामी कत्ति बिस्तारै अगाडि बढ्छौं, हामी गुणस्तरलाई त्याग्दैनौं। हाम्रोलागि के महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो सामग्रीको प्रत्येक तपाइँको सही आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्दछ।
हामी सूचना प्रदूषणको बिरूद्ध छौं। यसैले हामी हाम्रो लेखहरू व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग सकेसम्म तयारी गर्छौं। हामी हाम्रो लेखहरूको अन्तिम संस्करणहरू हाम्रो विशेषज्ञहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्छौं जुन हाम्रो लेखहरूको सत्यता पुष्टि गर्न सकिन्छ।
हामी व्यक्ति, भाषा, धर्म, जाति, अशक्तता वा रोगबिपरित जनतामा पुग्न बाधा अवरोधहरू पार गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गर्दछौं।
➜ ब्रान्ड र :्ग:
गाढा निलो, निलो: विश्वसनीयता
सुन्तला ऊर्जा र ईमानदारी
समुद्री हरियो: सही जानकारी
➜ तपाईंको प्रतिस्पर्धी को हो?
➜ तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू उनीहरूको साइटहरूमा प्रस्ताव गरिएका सुविधाहरू र सेवाहरू के हुन् तर तपाइँमा उपलब्ध छैनन्?
Articles लेखका लागि सन्दर्भ स्रोतहरू देखाउन। (हामी निर्माणाधीन छौं।)
Each प्रत्येक सामग्रीको लागि विशेष दृश्य काम गर्दछ। (हामी योजना चरणमा छौं।)
➜ तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूले उनीहरूको साइटहरूमा प्रस्ताव गर्ने सुविधाहरू र सेवाहरू भन्दा फरक रूपमा के गर्न सक्नुहुन्छ?
Experts हामी विशेषज्ञहरू र लोकप्रिय नामहरूको साथ अन्तर्वार्ता गर्छौं।
★ हामी अधिक लक्षित भाषाहरू र देशहरूमा पुग्न सक्दछौं।
Questions प्रश्नहरू सोध्नु नि: शुल्क हो, टिप्पणीहरू गर्न सकिन्छ र सदस्यहरू / विशेषज्ञहरु माझ सन्देश छ।
रोडम्याप परिचय उत्पन्न गर्दै
SEO रोडम्याप सिर्जना गर्न लिनु पर्ने कदमहरू
विस्तृत रोडम्याप सिर्जना गर्नु अघि, मलाई लाग्छ कि हामीले यहाँ पनि एक पहिचान सिर्जना गर्न आवश्यक छ। हामीले तपाईंको रोडम्याप सिर्जना गर्ने र सम्पादन गर्ने बखत यो एउटा खास मार्ग लिन मद्दत गर्दछ।
➜ तपाईंको लक्षित दर्शक को हो?
जो कोही सूचना को आवश्यक छ। (तपाईं यो उत्तर दिन सक्नुहुन्छ युवा व्यक्तिहरू, महिलाहरू, विश्वविद्यालय स्नातकहरू।)
➜ तपाईंको लक्षित दर्शक कहाँ अवस्थित छ?
सम्पूर्ण विश्व (तपाई यसलाई जवाफ दिन सक्नुहुन्छ इस्तानबुल, सबै टर्की, बुर्सा)।
➜ तपाइँ कसरी तपाइँको साइट मा तपाइँको आगंतुकहरु को लागी अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ?
तिनीहरू आफूले चाहेको जानकारी सजिलैसँग पहुँच गर्न सक्दछन् भन्ने लाग्दछन्, जानकारीको शुद्धताको बारेमा चिन्ता नगरिकन, प्रशंसा गरिरहेको
➜ कति साइट र जानकारी तपाइँ तपाइँको साइट मा प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ?
यो लगभग सँधै हो 🙂 (तपाईं जवाफ दिन सक्नुहुनेछ त्यति नै सन्तोषजनक रूपमा आवश्यक रूपमा।)
➜ के तपाइँ तपाइँको साइट मा तपाइँको आगन्तुक र ग्राहकहरु संग कुराकानी हुनेछ?
➜ के सोशल मिडिया तपाईंको साइट वा व्यवसायको लागि महत्वपूर्ण छ?
➜ के तपाइँ तपाइँको साइट मा आफ्नो संदर्भ वृद्धि गर्न चाहानुहुन्छ?
➜ के तपाइँ आगन्तुक सम्पर्क जानकारी स collect्कलन गर्नुहुन्छ?
➜ के तपाईं आफ्नो साइट मार्फत बेच्नुहुन्छ?
➜ यदि तपाईं बेच्ने क्रममा हुनुहुन्छ भने, भुक्तानी प्रक्रियाहरू तपाईंको साइटमा हुनेछ?
➜ के तपाइँसँग तपाइँको साइट को प्रकाशन को लागी एक मिति सेट छ?
मसँग यो थियो, मैले यसलाई पोष्ट गरेको थिएँ।
रोडम्याप बनाउँदा तपाईले सँधै यी दुई पहिचानहरू तपाईको अगाडि राख्नु पर्छ। तपाईं आफ्नो लक्ष्यहरू, तपाईं को हो, तपाईं के मा काम गर्नेछन् देख्नुहुनेछ।
SEO अध्ययन सुरू गर्दा सेट अप गर्नका लागि चीजहरू
तपाईंले यहाँ आफ्नो साइट रेजिष्ट्रेसन परिभाषित गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईं आफ्नो साइटम्याप सबमिट गर्न, त्रुटिहरू, स्कोप र अनुक्रमणिका पृष्ठहरू, र तपाईंको साइट प्रदर्शन अनुगमन गर्न सक्षम हुनेछ। थप सुविधाहरू पनि उपलब्ध छन्।
तपाईंले यहाँ आफ्नो साइट रेजिष्ट्रेसन परिभाषित गर्नुपर्छ। यहाँ तपाइँ आगन्तुक विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो लक्षित दर्शकहरू, व्यवहार, रूपान्तरण, लक्ष्यहरू ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ। थप सुविधाहरू पनि उपलब्ध छन्।
जब तपाईं गुगल एनालाइटिक्स सचेत स्थापना गर्नुहुन्छ, यो उपकरणले तपाईंलाई प्रदर्शनको बारेमा जानकारी दिनेछ। उदाहरण को लागी "SEO के हो? - Ne Gerekirतपाईंको पोष्टले 'गत हप्ता भन्दा बढि रूपान्तरणहरू प्राप्त गरेको छैन। यसैले तपाईले स्थिति को पाठ्यक्रम अनुसार लक्ष्यहरू तय गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको अगाडि भएका चरणहरू पुन: संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ।
Yandex मेट्रिका र बिंग वेबमास्टर उपकरणहरू
मेट्रिका, यांडेक्सको विश्लेषण कार्यक्रम, गुगल एनालिटिक्स भन्दा फरक ईन्टरफेस छ। यसले विश्लेषण रिपोर्टहरू प्रदान गर्दछ जस्तै सारांश, रिपोर्टहरू, भ्रमणहरू, याान्डेक्स खोज इञ्जिनबाट भ्रमणहरूको लागि रूपान्तरणहरू।
SEO प्लगइन / मोड्युल
तपाइँ आफ्नो साइट मा एक SEO प्लगइन जोड्नु पर्छ वर्डप्रेस प्लगइनहरू जस्तै All In SEO, Rank Math, Yoast को साथ। तपाईंले छनौट गरेको प्लगइनले तपाईंलाई तपाईंको आवाश्यकताहरू व्यवस्थित गर्न, तपाईंको नफोलो पृष्ठहरू निर्धारित गर्न, साइटम्याप सिर्जना गर्न, र सामग्री सिर्जना गर्ने क्रममा चेतावनी र स्कोरिंगका लागि मार्गदर्शन गर्दछ। त्यहाँ धेरै निःशुल्क र भुक्तान सुविधाहरू छन्।
यसले तपाइँको वेबसाइट मा आगन्तुक गतिविधि निगरानी गर्न अनुमति दिन्छ। यसैले, तपाईं फेसबुक विज्ञापनको प्रभावकारिता मापन गर्न सक्नुहुनेछ, विशेष लक्षित दर्शकहरू परिभाषित गर्नुहोस्, र विश्लेषण गर्नुहोस्। थप सुविधाहरू पनि उपलब्ध छन्।
गुगल एडीएस र एनालिटिक्स
यो फेसबुक पिक्सेलले फेसबुक विज्ञापनहरूमा एनालिटिक्स प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं गुगल एडीएस र गुगल एनालाइटिक्स एकसाथ परिभाषित गर्नुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो गुगल विज्ञापन विश्लेषण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईं विज्ञापनको प्रभावकारिता मापन गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईं अनुकूलित दर्शकहरूलाई परिभाषित गर्न सक्नुहुनेछ। थप सुविधाहरू पनि उपलब्ध छन्।
प्रयोगकर्ता अनुभव को लागी
भ्रमणकर्ता / प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्दै
तपाईंलाई थाहा छ आजकल पर्यटकहरू प्रायः मोबाइलबाट आउँदछन्। तपाईंको साइटहरू मोबाइल मैत्री हुनुपर्छ। तपाई यसलाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको विषयवस्तु यस्तो तरीकाले डिजाइन गर्न सकिन्छ कि आगन्तुकको औंला आरामसँग प्रयोग गर्न सकीन्छ। यो पनि सही विषयवस्तु छनौट गर्न अर्थमा हुनेछ।
त्यो क्षण कहिल्यै नबिर्सिनुहोस् जब तपाईं कसैलाई तपाईंको साइट देखाउने क्रममा ढिलो पेज ट्रान्जिसन द्वारा लज्जित हुनुहुन्थ्यो। तपाईंलाई थाहा छ कि आगन्तुक पृष्ठ सेकेन्ड लोड गर्न को लागी प्रतीक्षा गर्दैन। किनभने त्यहाँ दर्जनौं वैकल्पिक साइटहरू छन्। यदि उसले यहाँ फेला पार्न सकेन भने उसले यो अरू कतै भेट्टाउनेछ। यो थाहा पाउँदा, ऊ धैर्य हुनेछैन।
यी गल्तीहरूले तपाईलाई साँच्चिकै धेरै समस्या निम्त्याउँछन्। पाहुनालाई 404०XNUMX पृष्ठहरू मनपर्दैन, त्यसैले Google ले पनि गर्दैन। तपाईंले तिनीहरूलाई पछ्याउनु पर्छ र तपाईंको सम्बन्धित पृष्ठमा रिडिरेक्ट गर्नुपर्दछ।
आगन्तुक आन्दोलन विश्लेषण, आगन्तुक भिडियो रेकर्डि। र तातो नक्शा
यी आन्दोलनहरूको विश्लेषण गरेर, तपाईं समस्या के हो र के राम्रो हुँदैछ भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अर्को विधि छ जुन सबैलाई थाहा छैन। दर्शकहरूको हरेक चालको भिडियो रेकर्डि। यो वास्तवमै उपयोगी विधि हो। तपाईं आफ्नो घनत्व होभर देख्न सक्नुहुनेछ र हिटम्यापहरूमा क्षेत्र क्लिक गर्नुहोस्।
यो प्रमाणपत्र तपाइँको आगन्तुकहरु लाई सुरक्षित महसुस गराउँदछ। किनकि यसले साइट ठेगानाहरूको शुद्धता जाँच गर्दछ। यसले पासवर्डको रूपमा निजी जानकारीको सुरक्षित स्थानान्तरण प्रदान गर्दछ। यस प्रमाणपत्रको साथ साइटहरूमा URL बारको बाँया पट्टी लक वा हरियो क्षेत्र हुन्छ।
साइट प्रदर्शन अनुकूलन
होस्टिंग वा सर्वर कम्पनी
तिनीहरू वेबसाइट प्रकाशन सेवाहरू हुन् जुन तपाईंको साइटमा सबै पृष्ठहरू बिना रोकावट आगन्तुकहरूलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंले होस्टिंग वा सर्वर सेवा छान्नु पर्छ जुन तपाईंको सेवा क्षेत्रको नजिक छ। यो महत्वपूर्ण छ कि तपाइँ सेवाहरू प्राप्त गर्दा राम्रो प्रदर्शन र सुविधाहरू सहित प्याकेजहरू छनौट गर्नुहोस्।
तपाईंले खोज कन्सोलमा तपाईंको पृष्ठहरूको बारेमा चेतावनीहरू ध्यानमा राख्नुपर्दछ। तपाईसँग गुगलले फिक्स मान्य गर्नुपर्दछ। 404०410, 5१०, xxएक्सएक्स, 503०XNUMX जस्ता स्थिति स्कोप मुद्दाहरू हुन्। तपाईंले पहिले नै गुगल चेतावनी कन्सोलमा स्कोप सेक्सनमा यी चेतावनीहरू देख्नुहुनेछ।
तपाईंको पृष्ठहरू क्याच गर्दै
क्यासिंग तपाईको डेटाको अस्थायी भण्डारण हो। यसले ब्यान्डविथ र सर्भर लोड कम गर्दछ। यसले तपाईंको साइट गति बढाउनेछ।
JS / CSS फाईलहरू मिनिनिफ गर्दै
JS र CSS फाईलहरू प्रत्यक्ष साइट प्रदर्शन प्रदर्शन गर्दछ। तपाईं कम गर्न वा ढिलाइ गर्न यस व्यवसाय मा एक विशेषज्ञलाई आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। प्लगइनहरूले यी चीजहरू पनि गर्न सक्दछ, तर परिणाम स्वरूप, डिजाइनहरूमा त्रुटिहरू हुन सक्छ।
त्यहाँ प्लगइनहरू र साइटहरू छन् जुन छविहरूको आकारलाई केही हदसम्म कम गर्न सक्दछ तिनीहरूको गुणवत्तामा सम्झौता नगरीकन। यी कार्यहरू गर्नाले तपाईंको साइट गतिलाई पनि असर गर्दछ। वेबपी प्रारूप छविहरू हालको गतिको लागि सबभन्दा सटीक ढाँचा जस्तो देखिन्छ। तपाईं लोगो र भेक्टर छविहरूका लागि एसजीजी ढाँचा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
असिंक्रोनसले छविहरू लोड गर्दै
जब आगन्तुक सामग्रीमा ओर्लिन्छन्, छविहरू लोड गर्नाले साइटको शुरुवात गतिमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ।
यस प्रक्रियामा धेरै तरिकाहरू छन्, जस्तै डेटा प्रकार परिवर्तन गर्ने, अनुक्रमणिका जोड्ने, आईडी स्तम्भहरू अनुकूलन गर्ने। यो अनुकूलनको लागि पेशेवरसँग परामर्श लिनु राम्रो हुन्छ।
वेबसाइट टेक्निकल एसईओ अनुकूलन
गुणस्तरीय सामग्री सहित पृष्ठहरू अनुक्रमणिका हुनुपर्दछ। उही समयमा, तपाइँले अप्रासंगिक र सामग्री पृष्ठहरू (Noindex) को अनुक्रमणिका रोक्नु पर्छ।
यो एक प्रमाणिक सम्पादन हो कि negerekir.com र www.negerekir.com समान हो र कुन मान्य छ। धेरै पृष्ठहरू र यस जस्तो सामग्रीलाई यो ट्याग आवश्यक पर्दछ।
साइटम्याप र क्रल बजेट
तपाईंको साइटम्याप बिना नै गुगलले तपाईंको पृष्ठमा तपाईंको लिंक वितरणबाट पृष्ठहरू फेला पार्न र अनुक्रमणिका गर्न सक्दछ। तपाईंसँग केवल पृष्ठहरू हुन सक्छन् जुन तपाईं साईटम्यापमा अनुक्रमित चाहनुहुन्छ। त्यसकारण साइटम्याप खोजी बोटको लागि अझ राम्रो क्रलको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यस तरिकाबाट, तपाईं स्क्यानि budget बजेटमा पनि योगदान गर्नुहुन्छ।
लगातार 500०० पृष्ठहरू स्क्यान गर्नुको सट्टा, बट्स जिम्मेवार छन् high०० उच्च गुणवत्ता पृष्ठहरूको लागि जुन सूचकांकमा हुनुपर्दछ।
वेबसाइट सामग्री SEO अनुकूलन
तपाईंको सामग्रीसँग रणनीति पनि हुनुपर्दछ। तपाईंले आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछ्याउनु पर्छ र त्यस अनुरूप तपाईंको कमिहरूको लागि मेकअप गर्नुहोस् र उनीहरूले के प्रस्ताव गर्दैनन्।
कुञ्जी शब्दहरू शब्दहरू हुन् जुन दर्शकहरूले खोजी ईन्जिनहरूमा खोजी गर्दछन्। यी शब्दहरूको लागि सब भन्दा उपयुक्त परिणामहरू प्राप्त गर्न, तपाईंले कीवर्ड अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
जानकारीपूर्ण र गुणवत्ता सामग्री
सामग्रीको गुणवत्ता लम्बाई र ब्रविटी द्वारा मापन गर्न सकिदैन। तर लामो र उहि समयमा गुणस्तरीय सामग्री साँच्चिकै राजा हो।
आगंतुकहरूले वास्तवमा उनीहरूले खोजेको शब्दमा के चाहन्छन्? जानकारी प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ? वा उत्पादन किन्नुहोस्? यी खोज ईन्टेन्टको केवल २ हो। तपाईंले त्यस अनुसार तपाईंको सामग्री सिर्जना गर्नुपर्दछ।
छविहरू र भिडियोहरू
छविहरू र भिडियोहरूको साथ सामग्री खुवाउँदा दुबै आगन्तुकले तपाईंको पृष्ठमा खर्च गर्दछ र एक राम्रो अनुभव प्रदान गर्दछ। तपाईंले घटनास्थलमा भिडियोहरू प्रस्तुत गर्नुभयो भने तपाईंले वास्तवमै राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तपाईंको सामग्री नियमित रूपमा अपडेट गर्नुहोस्। सबै विकसित हुन्छन्। तपाईं एक अपडेट नक्शा सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं लेखहरू जाँच गर्न सक्नुहुनेछ जसको एजेन्डा महिनमा एक पटक धेरै परिवर्तन हुन्छ। तपाईं शीर्षकहरू जाँच गर्न सक्नुहुनेछ जसको एजेन्डा हरेक months महिनामा धेरै परिवर्तन हुँदैन।
साइट एसईओ अनुकूलन
अन-पृष्ठ एसईओ अनुकूलन
प्रयोगकर्ताको लागि सामग्री
प्रभाव पार्ने खोज ईन्जिनहरूले तपाईंलाई छोटो समयको लागि मात्र लाभ पुर्‍याउँछन्। तपाइँ पछि दण्डको सामना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको आगन्तुकलाई खुशी पार्नुहोस्, यो सरल छ।
मलाई लाग्छ कि तपाइँको सामग्री पृष्ठहरु मा एकल H1 शीर्षक प्रयोग गर्न चेतावनी पुरानो भइरहेको छ। गुगल वेबमास्टर्सले यस्तो भिडियोसँग जवाफ दिए जुन बहु H1 ट्यागले तिनीहरूको प्रणालीमा समस्या उत्पन्न गर्दैन। जहाँसम्म, यदि तपाईंसँग यसको लागि खास विशिष्ट रणनीति छैन भने, एकल H1 प्रयोग अधिक उपयुक्त हुनेछ।
तपाईंले अशक्त वा बिरामी व्यक्तिको लागि धेरै समस्याहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन सक्छ। त्यहाँ मुद्दाहरू हुनसक्दछ जुन तपाईंले ध्यान दिन आवश्यक पर्दछ, जस्तै रंगहरू, छविहरूमा तपाईंले प्रयोग गर्नुहुने वस्तु। यस विषयमा सब भन्दा प्रख्यात विधि भनेको दृष्टिविहीन व्यक्तिको लागि छविहरूमा Alt ट्याग थप्नु हो।
H1, H2, H3, H4, H5, H6 ट्याग वास्तवमा मुख्य हेडिंगबाट सब भन्दा सानो हेडिंगमा पदानुक्रम हुन्। दुबैलाई ती सही तरिकाले प्रयोग गर्नाले आगंतुकले उनीहरूले पढेका सामग्रीबाट टाढा हुन रोक्छ र गुगलका लागि सुराग प्रदान गर्दछ।
मेटाईएको मेटा शीर्षक र मेटा विवरण
तपाईको शीर्षकमा तपाईको कुञ्जी शब्द हुनु पर्छ र रमाईलो हुनुपर्दछ। कहिलेकाँही यसमा अंकहरू हुनुपर्दछ, कहिलेकाँही यसले तपाईलाई चकित तुल्याउनुपर्दछ ... याद राख्नुहोस्, तपाईको हेडलाईन पहिलो चीज हुनेछ जुन तपाईको आगन्तुकले देख्न सक्ने छन्।
मेटा विवरणले तपाइँको कुञ्जी शब्दहरू र क्लिकमा नेतृत्व गर्न सक्दछ।
आन्तरिक र बाह्य लिंकहरू
तपाईं प्रासंगिक सामग्रीमा पुनःनिर्देशित गर्न सक्नुहुनेछ। साथै अन्य साइटहरूमा लिंक गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। उनीहरूको लागि काम गर्ने कुनै पनि कुराले आगन्तुक र गुगललाई खुशी पार्दछ।
अफ-पृष्ठ SEO अनुकूलन
अफ पृष्ठ एसईओ अनुकूलन
यो त्यस्तो अंश हो जहाँ तपाईं धेरै सावधान हुनुपर्दछ। कृपया ब्याकलिंक प्याकेजहरू किन्न प्रलोभनमा नपर्नुहोस्।
ब्याकलिks्कको बारेमा आफैलाई भन्नुहोस्: कम, बढि! यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई स्थानहरूमा उल्लेख गरिएको छ जुन तपाईंलाई वास्तवमै प्रतिक्रिया दिन्छ र अन्तर्क्रिया बनाउँदछ। तसर्थ, यो सोच्दछ कि मसँग धेरै ब्याकलिks्कहरू छन्, उत्तम छ, केही दुष्टता बाहेक।
के म रणनीतिक कुरा गरिरहेको छु कि तपाइँ आफ्नो सामग्री अनुसार आफ्नो प्रतिस्पर्धी जाँच्नु पर्छ। तिनीहरू जहाँ छन् त्यहाँ काम गर्न प्रयास गर्दै। यो ठाउँ पनि फेला पार्नु एकदम महत्त्वपूर्ण छ जहाँ उनीहरू छैनन्। तपाईंको ब्रान्ड नाममा लिंक गर्न निश्चित हुनुहोस्।
ब्राण्ड जागरूकताका लागि तपाईंको सामाजिक नेटवर्कबाट लिंकहरू लिनु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईको सामाजिक नेटवर्कको सक्रियता प्रयोग गर्नाले यस जागरूकताका लागि स the्केतहरू बढाउनेछ। यो पनि महत्वपूर्ण छ कि तपाइँ सामाजिक मिडिया-विशिष्ट सामग्री उत्पादन गर्नुहोस्।
अतिथि लेखक बन्नुहोस्
तपाइँ शीर्षक वा प्रासंगिक साइटहरूमा तपाइँको साइट उल्लेख गर्न अतिथि लेखक हुन सक्नुहुन्छ। यी लेखहरू पनि मूल हुनुपर्दछ र अध्ययन गर्नुपर्दछ।
स्थानीय एसईओ अनुकूलन
साइट को लागी स्थानीय SEO समायोजन
गुगल मेरो व्यवसाय, Yandex नक्शा, बिंग व्यवसाय
यहाँ तपाईंको कार्यालय वा पसलको स्थान निर्दिष्ट गरेर, तपाईं थप पहुँचयोग्य हुनुहुनेछ। तपाईका धेरै सुविधाहरू उल्लेख गर्न र तपाई खुला रहनु भएको घन्टाहरू देखाउन सक्नुहुन्छ।
गुगल र सोशल मिडियामा क्षेत्रीय विज्ञापनहरू राख्नुहोस्। तपाईं स्थानीय साइटहरूमा तपाईंको ब्रान्ड उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ।
किन SEO महत्त्वपूर्ण छ?
एसईओ एक पहुँचयोग्य र गुणवत्ता साइट सिर्जना गर्न आवश्यक छ। यो धैर्य र प्रयास लिन्छ।
तपाईंसँग धेरै प्रतिस्पर्धीहरू छन्। यिनीहरूले तपाईंलाई यी सबै विकल्पहरूमा कसरी फेला पार्नेछन्? अवश्य पनि, एक गुणवत्ता एसईओ कार्य र त्यस पछि खोज परिणाम परिणामको साथ ...
यदि तपाईं एसईओ काम गर्नुहुन्न भने, गुगल जस्ता खोज ईन्जिनहरूका पहिलो पृष्ठहरूमा देखा पर्न असम्भव हुन्छ। यो काम राम्रोसँग गर्नाले तपाइँलाई ब्रान्ड जागरूकता र विश्वसनीयताको सर्तमा सकारात्मक बिन्दुहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ। त्यहाँ एक उच्च सम्भावना छ कि तपाईं पहिलो पृष्ठहरूमा हुन कुनै फरक पर्दैन तपाइँले समय के के गर्नुभयो।
जे होस् तपाईसँग वेबसाइट छ र SEO कसरी गर्ने जान्नु हुन्छ, यो टोलीमा छोड्नु महत्वपूर्ण रणनीति हुन सक्छ। किनभने एसईओ एक मुद्दा हो जुन ध्यान आवश्यक छ। यदि तपाईं मलाई प्राविधिक अंश दिन चाहन्छु भने लेख लेख्नुहोस् र SEO मा काम गर्नुहोस्, तपाईं पूर्ण गुण प्रदान गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। होईन, केहि पनि असम्भव छैन।
के म SEO लाई स्वचालित गर्न सक्छु?
यो केहि हो। यो श्रमको काम हो, तपाईले यहाँ कहिले सर्टकट पाउनुहुने छैन। त्यसोभए त्यस्ता मामिलाहरूको बारेमा बिचार नगर्नुहोस् र केवल तपाइँको आगन्तुकलाई खुशी पार्ने प्रयास गर्नुहोस्।
के एसईओ राम्रो क्यारियर हो?
हो सात सम्म। यो वास्तवमै ठूलो काम हो जहाँ तपाईं जहिले गतिशील महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने SEO जहिले विकसित र परिवर्तन हुँदै छ। टर्कीमा त्यहाँ धेरै थोरै मानिस छन् जसको SEO कार्य धेरै उच्च गुणवत्ताको छ। त्यसकारण, तपाईं आफैंलाई सुधार गरेर केही व्यक्तिहरूमध्ये हुन सक्नुहुन्छ।
SEO विशेषज्ञ तलब
कुन कुन क्षेत्रहरू तपाइँ अनुकूलित गर्दै हुनुहुन्छ र कुन विषयहरूमा तपाईं काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ। यो फरक छ यदि तपाईं केवल आन्तरिक अप्टिमाइजेसन गर्दै हुनुहुन्छ, फरक छ यदि यसले रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दछ भने फरक, यदि यसले सबै काम ह्यान्डल गर्न सक्दछ भने। Reporting०--50० TL को दायरा केहि छ मात्र रिपोर्टिंग को लागी। मासिक परामर्शदाताहरूले १,०००-१-350,००० को बीचमा मूल्य प्रस्ताव गर्न सक्दछन्। जसले सबै काम गर्दछन् १००-२०,००० को बीचमा मूल्य प्रस्ताव गर्न सक्दछ।
एसईओ नि: शुल्क छ?
यदि तपाईं आफैंमा यसलाई पूर्ण रूपमा गर्न को लागी प्रयास गर्नुहुन्छ भने पनि यो नि: शुल्कका लागि धेरै गाह्रो छ। यदि तपाईं आफैंमा केहि मुद्दाहरूमा यो गर्न प्रयास गर्नुभयो जुन तपाईं एक विशेषज्ञ हुनुहुन्न, तपाईं साईटमा अपरिवर्तनीय समस्याहरू निम्त्याउन सक्नुहुनेछ।
के एसईओ सिक्न सजिलो छ?
यसको तर्क सिक्न सजिलो छ तर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो 🙂
तपाइँले हाम्रो लेख कसरी फेला पार्नुभयो? हामीसँग SEO को बारे मा केहि जानकारी साझा गर्नुहोस्। People व्यक्तिको साइटहरूको लागि जो जानकारी प्रदान गर्दछन् जुन हामी सब भन्दा चाखलाग्दो फेला पार्दछौं नि: शुल्क SEO विश्लेषण हामी तयार हुनेछौं! 😊
साक्षात्कार SEO बारे
हाम्रो लेखमा Wix को बारे मा सबै अनुरोध गरिएको जानकारी छ। मुख्य;
टीम र प्याकेजहरू
Healthvn247.jweb.vn | ।।
06/08/2021 at 07:01 - जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, मैले भर्खरै गुगल बाट तपाइँको वेबसाइट को बारे मा एक अधिसूचना प्राप्त गरेको छु र मैले पत्ता लगाएको छु कि यो साँच्चै सूचनात्मक छ। मँ मेरो आफ्नै वेबसाइट को लागी यहाँ के लेखिएको छ ध्यान दिनेछु।
म आभारी हुनेछु यदि तपाइँ भविष्य मा यो गुण संग जारी राख्नुहुन्छ।
धेरै मानिसहरु तपाइँको लेख बाट लाभान्वित हुनेछन्।
09/08/2021 at 13:32 - जवाफ दिनुहोस्
अनन्त धन्यवाद! हामी जारी राख्नेछौं ...
Badiet.ir | ।।
05/08/2021 at 19:36 - जवाफ दिनुहोस्
गुणस्तरीय सामग्री आगन्तुकहरुको फोकस हुनुको रहस्य हो। यो वेबसाइट त्यो प्रदान गर्दछ।
09/08/2021 at 13:31 - जवाफ दिनुहोस्
मुरी मुरी धन्यवाद! ।।
अलाना चौवेल | ।।
05/08/2021 at 13:58 - जवाफ दिनुहोस्
मँ यो भन्दै बिना तपाइँको साइट छोड्न सक्दिन कि मँ तपाइँको लेख मा एक उदाहरण को रूप मा बनाईएको ब्रान्ड पहिचान र रोडमैप पढेर रमाईलो लाग्यो। म तपाइँको साइट मा नियमित रूप बाट नयाँ पोस्ट को समीक्षा गर्न को लागी आउनेछु।
हामी धेरै धेरै रमाईलो कथाहरु मा काम गरीरहेका छौं। तपाइँलाई खुशी पार्न सक्षम हुनु संसारको सबैभन्दा राम्रो भावना हो! ।।
05/08/2021 at 02:40 - जवाफ दिनुहोस्
साथै, अनुभव प्राप्त गर्न को लागी उत्सुक, यस वेबपृष्ठ को गति महान लाग्यो। यो लेख को बारे मा सबै साथीहरु को राय पढ्न महान छ। अन्तमा, तपाइँको साक्षात्कार को लागी धेरै धेरै धन्यवाद!
09/08/2021 at 13:30 - जवाफ दिनुहोस्
गति साँच्चै हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ। यसबाहेक, हामी विस्तृत अध्ययन छ ताकि तपाइँ जानकारी लाई तपाइँ एक धेरै छोटो समय मा अधिक कुशलता संग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ चाँडै फरक महसुस गर्नुहुनेछ! ।।
03/08/2021 at 17:17 - जवाफ दिनुहोस्
मँ वास्तव मा यो लेख पढ्न को लागी उत्सुक छु, यो दैनिक अपडेट गर्न को लागी आवश्यक छ। यो राम्रो डाटा समावेश गर्दछ।
09/08/2021 at 13:29 - जवाफ दिनुहोस्
मुरी मुरी धन्यवाद! Our हाम्रो लेख को अपडेट एक महिना मा एक पटक जाँच गरीन्छ। सादर…
साइरस बिलियट | ।।
29/07/2021 at 08:28 - जवाफ दिनुहोस्
तपाइँसँग एक महान ब्लग छ तर म जान्न चाहान्छु यदि तपाइँ कुनै समुदाय फोरम को बारे मा जान्नुहुन्छ कि उही विषयहरु लाई यहाँ चर्चा गरीएको छ।
मँ साँच्चै समुदाय को एक हिस्सा हो जहाँ म अन्य अनुभवी व्यक्तिहरु जो एउटै चासो साझा बाट प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सक्छु हुन चाहन्छु।
यदि तपाइँसँग कुनै सुझाव छ, कृपया मलाई थाहा दिनुहोस्। धन्यवाद!
09/08/2021 at 13:41 - जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार धन्यवाद। ।।
पक्कै त्यहाँ छ। तर अहिले यो एक ठाउँ जहाँ तपाइँ आफ्नो भाषा मा सहज महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भेट्टाउन गाह्रो छ। यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्न छ वा केहि तपाइँ छलफल गर्न चाहानुहुन्छ, मँ तल दिईएको लिंकमा तपाइँलाई निर्देशित गर्नेछु।
Ne Gerekir विशेषज्ञहरुलाई एउटा प्रश्न सोध्नुहोस्
शेली कुयकेन्डल | 🇷🇺
26/07/2021 at 23:51 - जवाफ दिनुहोस्
सबैलाई नमस्कार, यो वेब पृष्ठ मैले देखेंको यो पहिलो पटक हो। यो लेख मेरो लागि डिजाइन गरिएको हो जस्तो छ। वास्तवमै कुशल। त्यस्ता लेख पोष्ट राख्नुहोस्।
27/07/2021 at 08:54 - जवाफ दिनुहोस्
मुरी मुरी धन्यवाद! तपाईं पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि हामी जारी राख्नेछौं!
24/07/2021 at 14:15 - जवाफ दिनुहोस्
Heya उत्कृष्ट वेबसाइट! के यस जस्तो ब्लग चलाउन धेरै काम लिन्छ? मसँग कुनै प्रोग्रामिंग विशेषज्ञता छैन तर चाँडै मेरो आफ्नै ब्लग सुरु गर्ने आशामा थियो। जे भए पनि, यदि तपाइँसँग नयाँ ब्लगरहरूको लागि कुनै सुझाव वा सुझाव छ भने, कृपया साझेदारी गर्नुहोस्।
मैले बुझें कि यो मुद्दा हो, तर जे भए पनि सोध्न चाहान्छु। चियर्स!
27/07/2021 at 09:36 - जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार बाइक। Ners शुरुवातकर्ताहरूको लागि ब्लग सुरू गर्नमा कठिनाई निर्भर गर्दछ जुन तपाईं कुन सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीबाट सुरू गर्नुहुन्छ। तपाईं सेट गर्न र मिनेटमा Wix मा आफ्नो ब्लग सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ टेक्निकल सीमितता बाहेक SEO अनुकूलनमा राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ म Wix को बारे मा हाम्रो लेख छोड्छु।
यदि तपाईं एक दीर्घ-अवधि र बढ्दो प्रणाली चाहनुहुन्छ भने, तपाईं WordPress संग पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ, तपाईं SEO अप्टिमाइजेसनमा कुनै सीमितताहरूको सामना गर्नुहुने छैन। तर यहाँ ब्लग सेट अप गर्न विक्स भन्दा अलि बढी चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। जे होस्, तपाइँ के चाहानुहुन्छ सोच्नुहोस् र सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली छनौट गर्नुहोस् जुन तपाइँलाई मिल्छ।
नयाँ ब्लगरहरूले प्राविधिक कार्य पूरा भएपछि YouTube च्यानल जस्ता रिलीज मितिहरू सेट गर्नुपर्दछ। यो यी मितिहरूको पालना गर्न र एक अखबार जस्तै प्रकाशन मिति याद गर्नु हुँदैन। तिनीहरूको लेखहरू अर्थपूर्ण हुनुपर्दछ, राम्रो गुण र उपयोगीको। पूर्ण रूपमा अद्वितीय हुनु गुगलका लागि महत्त्वपूर्ण छ, अवश्य पनि, तर उपयोगी हुनु बढी महत्त्वपूर्ण छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईं सहयोगी स्रोतहरू उद्धृत गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको आफ्नै वाक्यहरू बनाउनको लागि प्रयासले यहाँ समयको बर्बादी सिर्जना गर्दछ। केही समय पछि, तपाइँ तपाइँको सामग्री बिभिन्न विधिहरूको साथ समृद्ध गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको साइटलाई चाहिने अन्य प्रक्रियाहरूको बारेमा सोच्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
19/07/2021 at 14:00 - जवाफ दिनुहोस्
म साँच्चिकै खुसी छु कि मैले खोजेको कुरा भेट्टाए।
तपाईंले मेरो day दिनको शिकार समाप्त गर्नुभयो! भगवान तपाईंलाई मानिस आशीर्वाद दिनुहोस्। शुभ दिन।
26/07/2021 at 09:17 - जवाफ दिनुहोस्
हामी खुसी छौं कि तपाईले हाम्रो लेख रमाईलो गर्नुभयो। हाम्रो लेख सँधै अप टु डेट हुनेछ। हामी तपाईलाई राम्रो दिन चाहन्छौं! 😊
सर्वश्रेष्ठ बार र ग्रिल इन हिकोरी | 🇹🇭
23/06/2021 at 15:47 - जवाफ दिनुहोस्
सुपर, यो कस्तो ब्लग हो! यस वेबसाइटले हामीलाई उपयोगी जानकारी प्रदान गर्दछ, अगाडि बढ्नुहोस्।
23/06/2021 at 15:50 - जवाफ दिनुहोस्
तपाईंको टिप्पणीले हामीलाई धेरै आनन्दित बनायो। मुरी मुरी धन्यवाद। हामी यस्तो जारी राख्नेछौं! 😊
जोनेल म्याकिनले | 🇨🇿
21/06/2021 at 13:02 - जवाफ दिनुहोस्
हम्म, यो ब्ल्ग लोड गर्न को लागी कसैलाई समस्या छ? म निर्धारण गर्न कोशिस गर्दै छु कि समस्या म हो वा ब्लग। कुनै पनि प्रतिक्रिया अत्यधिक सराहना गरिनेछ।
21/06/2021 at 14:25 - जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार! म पृष्ठमा छविहरू देख्न सक्दछु तपाईंमा पुनःनिर्देशित गर्दै। मलाई लाग्दैन कि त्यहाँ कुनै समस्या छ।
यदि तपाईं वर्डप्रेस प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंको तस्विरहरू बिस्तारै बगिरहेको छ भने, तपाईं वेबपेस्ट र नाइट्रोप्याक जस्ता अनुप्रयोगहरूसँग यो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईले मागेको अरु केहि पनि छ भने, म छिट्टै मद्दत गर्न खुशी थिएँ। शुभेक्षा सहित…
लेजर ईस्ट | 🇨🇿
15/06/2021 at 18:01 - जवाफ दिनुहोस्
के म आपत्ति जनाउँछु यदि मैले तपाईंको केहि लेख उद्धरण गरें जबसम्म म तपाईंको वेबसाईटमा फन्डिंग गर्दैछु? मेरो ब्लग तपाईको उस्तै रुचि हो र मेरा प्रयोगकर्ताहरूले तपाईले यहाँ प्रदान गर्नुहुने केही जानकारीबाट फाइदा लिनेछन्।
कृपया मलाई थाहा दिनुहोस् यदि यसले तपाईंको लागि कार्य गर्दछ भने। धेरै धेरै धन्यवाद!
15/06/2021 at 20:20 - जवाफ दिनुहोस्
हामी सम्मानित भयौं हामीलाई तपाईंको साइटहरूको डोमेन नाम पठाउनुहोस् जुन तपाईं साझा गर्नुहुनेछ। यसको बारेमा कुरा गरौं!
✉️ [ईमेल सुरक्षित]